ऊर्जा मन्त्रालय : १५ अर्ब बजेट माग
जेठ १४, काठमाडौं: आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि ऊर्जा मन्त्रालयले रू. १५ अर्बभन्दा बढी बजेट माग गरेको छ । यो राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकिदिएको बजेट सिलिङअनुसारको माग हो । हालसम्मलाई आयोगले तोकेको सिलिङलाई नै ऊर्जा मन्त्रालयको बजेट माग मान्नुपर्ने अवस्था रहेको मन्त्रालयको योजना महाशाखाका प्रमुख प्रवीणराज अर्यालले बताए । ‘आयोगबाट सिलिङ प्राप्तिपछि विभिन्न चरणमा छलफल भएका छन्,’ अर्यालले भने, ‘जसबाट विभिन्न शीर्षकमा गरी थप बजेट माग पठाउने काम भए पनि सिलिङलाई नै अहिलेसम्मको आधिकारिक माग मान्नुपर्ने अवस्था छ ।’
आयोगले मन्त्रालयलाई रू. १५ अर्ब १ करोड ६० लाखको बजेट सिलिङ दिएको छ । सो रकम मन्त्रालयले गत आव २०७३/७४ मा प्राप्त गरेको बजेटको तुलनामा रू. १ अर्ब ८१ करोड ५२ लाख ७३ हजारले बढी छ । गत वर्ष ऊर्जा मन्त्रालयले रू. १३ अर्ब २० करोड ७ लाख २७ हजार बजेट प्राप्त गरेको थियो । सिलिङमा चालू तर्फभन्दा पूँजीगततर्फ ९ गुणा बढी रकम रहेको छ । सोअनुसार पूँजीगततर्फ कुल रू. ९ अर्ब ८६ करोड ६० लाख बजेट निर्धारण गरिएको छ ।